Fenix ​​OS: ny fijerin'ny macOS sy Windows Made in Spain | Avy amin'ny Linux
Mety hisalasala ianao amin'ny fanaovana ilay fitsambikinana mankany GNU / Linux ary tsy mahita fizarana mety. Ho fanampin'izay, mety te-hankafy ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny Linux ianao, fa tsy mahafoy ny lafiny sary amin'ny Windows na macOS. Raha izany no izy Fenix ​​OS dia iray amin'ireo tetikasa afaka mitondra anao ny tsara indrindra amin'ny rafitra tsirairay ...
Ary koa, ity chameleon distro ity dia Vita any Espana, ary mampiasa Ubuntu ho toy ny fotony. Noho izany, manana fototra mafy orina, fahamendrehana, filaminana ary filaminana izy io. Ho fanampin'ireo fonosana marobe azo alaina ho an'ny distro Canonical sy ny fanohanan'ny mpamily tsara ka tsy olana ny fifanarahana fitaovana.
Fantatro fa efa misy tetikasa hafa izay manahafana ny fisehoan'ny macOS, toy ny OS ambaratonga voalohany, na tetikasa hafa toa ny Zorin OS hanahaka an'i Windows, ary koa ny Linspire mampiady hevitra, ary koa ireo tetikasa ho an'ny SBC Raspberry Pi toy ny iRaspbian sy Raspbian X. Ary misy koa lohahevitra marobe izay azonao ampiasaina mba "handrindra" ny biraonao ary hataony toy ny zavatra tianao ...
Azonao atao mieritreritra fa tsy mitondra zava-baovao ny Fenix ​​OS, saingy diso ianao. Ny hevitra an'ity distro ity dia ny hahafahana mampifanaraka ny fahazoana ny endrika tadiavinao toy ny chameleon. Azonao atao ny mametraka ny fisehoan'ny macOS (X sy klasika), na ny kinova samihafa amin'ny sehatra Microsoft, manomboka amin'ny Windows 95, ka hatrany amin'ny Windows 10, amin'ny alàlan'ny XP, 7, sns malaza.
Endri-javatra hafa an'ny Fenix ​​OS
Ho fanampin'ny fisehoana mamaly, Fenix ​​OS dia noforonina ihany koa mba hiasa mahomby amin'ny motherboard. Raspberry Pi. Manana fanjifana RAM 1 GB fotsiny izy, ary mifanaraka amin'ny maritrano ARM an'ny chips-ny.
Manana be dia be entana amin'ireo rindrambaiko efa napetraka, toy ny LibreOffice, Openshot, Audacity, Inkscape, mpanjifa Telegram, sns, ary koa ireo hafa izay tsy apetrakao amin'ny alàlan'ny default toy ny Kodi, RetroPie, ...
Manana izany anatn'ny ho an'ny fitantanana fonosana.
Anisan'izany ny mpanampy anao manokana a emulator ho an'ny android antsoina hoe AndEmu, hahafahanao mihazakazaka ny fampiharana sy ny lalao video rehetra an'ny rafitra Google amin'ny distro anao.
Sehatra birao marobe azo isafidianana. Fenix ​​OS dia azo sintonina amin'ny sary miaraka amin'i XFCE, Kanelina, LXDE ary Openbox. Ahitana lohahevitra hanahaka ny Windows sy macOS izy ireo.
Hita amin'ny fiteny maro, ao anatin'izany ny espaniolal.
Raha tianao izany, dia afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa ianao na mijery horonan-tsary sy sary mampiseho ny mety hanovana ny endrika hita ao amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa. Ho fanampin'izay, azonao atao to download ny sary vonona hapetraka ao amin'ny SD, na koa mihazakazaka azy nefa tsy mametraka na aiza na aiza tianao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fenix ​​OS: ny fijerin'ny macOS sy Windows Made in Spain
catpi9049 dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, saingy ankoatry ny fisehoana dia tokony ho nanantitrantitra bebe kokoa aho fa manana seranan'i ubuntu mate miaraka amin'ny gnome ho an'ny pi 4, satria amin'izao fotoana izao dia tsy misy vady ubuntu ho an'izany ary tsy misy zavatra miaraka amin'ny gnome framboise. Na amin'ny zava-misy fa ny raspberry dia afaka mamindra ireo effets windows izay mihodinkodina ... tsy mikorontana, na mandany ondrilahy 500mb ny KDE ary mandeha tsara rehefa manana gentoo kde aho misintona fahatsiarovana virtoaly ary overclocked satria raha tsy izany dia tsy azo raisina.
Mamaly an'i catepi9049
Laura Sancho Garcia dia hoy izy:
Tena milay, tsy mbola nahita distro na lohahevitra nahomby tamin'io lafiny io aho, nanao fahadisoana mihitsy ary nino fa mampiasa ny solosaiko ary efa nitomany aho satria noheveriko fa voafafa ireo rakitrao. 2 andro no nanandramako azy ary mandeha tsara amin'ny Raspberry 4gb aho. Alohan'ny nilafaniako ny lohako hametrahana zavatra, manana ny zavatra ilaiko rehetra aho izao ary raha misy zavatra tsy ampy dia afaka mametraka azy mora foana aho, mieritreritra aho fa tsy mila ny Windows Windows intsony, Linux dia tsara.
Valiny tamin'i Laura Sancho García
Ny kinova IPFS 0.6 vaovao dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony